नेपाल आज | प्रेम प्रस्ताव राख्नेलाई ‘ब्लक’ गर्छु, यौनको उन्माद छैन
कभर स्टोरी कला साहित्य
प्रेम प्रस्ताव राख्नेलाई ‘ब्लक’ गर्छु, यौनको उन्माद छैन
बुधबार, ०१ फागुन २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज
आफना गीत, कविता तथा गजलबाट सामाजिक सन्देशसहित समाज रुपान्तरणमा कटिबद्ध कवि तथा संस्कृती अन्वेषक हेमन्त विवश यसपटक प्रेम र यौनका बिषयमा समेत पोखिएका छन् ।
भ्यालेन्टाइन डे अर्थात प्रणय दिवसको सन्दर्भमा हामीले विवशसंग गीत, संगित, साहित्य तथा प्रेम र यौनबारे खुलेर कुराकानी गरेका छौं ।
विवशले आफनो मात्र होइन हाल अस्वस्थ रहनु भएका प्रा.डा. डीपी भण्डारीको प्रेम जीवनका केही पक्षको खुलासासमेत गरेका छन् । विवश डा. भण्डारीका मृगस्थलीबाहेकका सबै पुस्तकका सम्पादकसमेत हुन् ।
सृजनाबाट समाज रुपान्तरण
कवि विवश पछिल्लो समय कवितामार्फत सुदूरपश्चिमको कला, संस्कृति, रहनशहन र भेषभुषाको प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । डोटी जन्मघर भएका विवशको साहित्यको थालनी छन्दका कविताबाट भएको हो । तर, हाल देशब्यापी एकल कविता वाचन कार्यक्रममा भने उनले पद्य भन्दा गद्यका कवितका बढी सुनाए । उनका अनुसार गद्य कवितामा पनि गजबको छन्द मिसिएको हुन्छ ।
आफूले देशका बिभिन्न स्थानमा एकल कविता वाचन कार्यक्रमबाट समाज नै परिवर्तन गर्न नसकेपनि मानिसलाई झकझक्याउन भने सफल भएको उनी बताउँछन् ।
ठाडी भाका पनि डेउडा
पछिल्लो समय के आधुनिक, के पप, के दोहरी, के चलचित्र सबैतर्फ डेउडा गीत प्रयोग हुने गरेको छ । यसको लोकप्रियता ब्यापक छ तर ठाडी भाकाको प्रयोग भने घट्दो छ । भेडी खर्के साहिंलादेखि बीमाकुमारी दुरासम्मले गाउने ठाडी भाका र सुदूरपश्चिममा डेउडाको ठाडी भाकाबीच धेरै समानता रहेको विवशको बुझाइ छ ।
डेउडा गीतको संरचना र यसको खेलमा नियम भएपनि ठाडी भाका पनि डेउडा भित्रै पर्ने उनी बताउँछन् ।
साहित्य र प्रेम
विवशका अनुसार अक्सर साहित्यकार तथा कलाकार रसिक हुने र त्यही रसिकपनका आधारमा मानिस प्रेमतर्फ बढी झुक्ने गर्दछ । नेपालमा मात्र होइन बिश्वका प्रतिष्ठत साहित्यकारहरुका अनौठा प्रेमका कथा रहेको उनी स्वीकार्छन् ।
म प्रेमी हुँ तर प्रेम स्वीकार छैन
विवश अनौठा मान्छे छन् । उनलाई आफूलाई कसैले प्रेम गरोस भन्ने चाहना छ, तर फेसबुक म्यासेन्जर वा कुनै माध्यमले कसैले उनीसामु प्रेम व्यक्त गरे त्यो उनलाई सहन हुँदैन । उनले दर्जनौ यस्ता प्रेम प्रस्ताव राख्ने महिलालाई फेसबुकमा ब्लक गरेका छन् । विवाह अघि र विवाह पछिको आफनो आनीबानीसमेत बदलिएको उनको अनुभव छ ।
डीपी भण्डारीका सयौं प्रेमिका
प्रा.डा. डीपी भण्डारी हाल अस्वस्थ छन् । उनी बिर्षने रोग अर्थात अल्जाइमरबाट ग्रसित छन् । उमेर ८२ काटेका भण्डारीको नयाँ पुस्तक बजारमा ल्याउने अन्तिम तयारीमा विवश लागेका छन् ।
जतिबेला डा. भण्डारी हिंडडुल गर्न सक्थे, बोल्न सक्थे त्यो बेला उनका भाषण, लेख सदैव चर्चामै हुने गर्दथे । कुनै सार्वजनिक मञ्चमा पहिलो पङ्तीमा सुन्दर महिलाहरु भएनन् भने उनलाई भाषणको मुड नै बन्थेन ।
दार्शनिक ओशोका प्रवचनमा पनि बिभिन्न ठाउँमा भण्डारीको नाम उल्लेख भएको पाइन्छ । भण्डारीको मृगस्थली पुस्तकको बिमोचन गर्दा त तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भण्डारीले भने आफू नर्क जान पनि तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
भण्डारीका निकै निकटका मित्र रहेका विवशका अनुसार भण्डारीका लेखमा प्रयोग हुने अधिकांश महिलाहरुको नाम उनका प्रेमीका हुन् । ती नाम कतिपय वास्तविक हुन भने कतिपय नाम परिवर्तन, तर कथा यथार्थ ।
‘भण्डारीले जीवनमा थुपै्रलाई प्रेम गरे । भण्डारी असल प्रेमी हुन् ।’ विवश बताउँछन् ।
बुद्धको देशमा अहिंसामा विश्वास गर्ने हामीले झन्डै ३ अर्बको मासु खायौ र जनैपूर्णिमा १ अर्ब बराबरको आयातित जनै लगायौ
'अव जनता बोल्छन् कार्यक्रम' सार्वजनिक (भिडियो)